Famakafakana ny iPhone 13 Pro Max: inona no niova | Vaovao IPhone
Luis Padilla | 27/09/2021 19:15 | iPhone 13, maro
Eto ny iPhone 13, ary na dia tsara tarehy aza ny maodely rehetra dia mitovy amin'ny teo alohany, saika mitovy, ny fanovana entin'ireto telefaona vaovao ireto dia zava-dehibe ary lazainay aminao eto.
Ny smartphone Apple vaovao dia eto, ary amin'ity taona ity no miova izay mitranga ao anatiny. Aesthetically dia mety hitarika hieritreritra fa miatrika smartphone iray ihany isika, na dia misy ihany koa ny fiovana kely izay tsy maintsy raisintsika, fa ny fiovana dia ao amin'ny "anatiny". Aza afangaro amin'ny fisehoana ivelany, satria misy fiantraikany amin'ny ampahany lehibe amin'ny finday toy ny efijery, bateria ary fakan-tsary ny vaovao, indrindra ny fakantsary. Amin'ity taona ity ny fanadihadianay ny iPhone 13 Pro Max dia mifantoka amin'ireo fanatsarana ireo mba hahafantaranao tsara izay atolotry anao ity terminal vaovao ity.
2 Fampisehoana 120Hz
3 Batterie tsy mety resy
4 Sary tsara kokoa, indrindra amin'ny hazavana ambany
5 ProRes Video sy Mode sinema
6 Fiovana tena lehibe
Apple dia nitahiry ny famolavolana ny iPhone 12 ho an'ny iPhone 13, hatrany amin'ny maro izay miresaka momba ny iPhone 12s. Etsy ankilany ny fifanakalozan-kevitra tsy marina, marina fa sarotra ny manavaka ny telefaona vaovao amin'ny maso mitanjaka amin'ilay iray natomboka herintaona lasa izay, miaraka amin'ny sisiny mahitsy, ny efijery fisaka tanteraka ary ny maodelin'ny fakantsary miaraka amin'ireo lantira telo napetraka ao anatin'io fandaharana telozoro mampiavaka io. . Misy loko vaovao, Sierra Blue, ary voatazona ireo loko telo kilasika: volamena, volafotsy ary grafita, ity farany ity no hasehontsika amin'ity lahatsoratra ity.
Ny fisehon'ny bokotra, ny switch moana ary ny mpampitohy ny varatra eo anelanelan'ny mpandahateny sy ny mikrô dia mitovy. Ny hatevin'ny terminal dia nampitomboina kely (0,02cm mihoatra ny iPhone 12 Pro Max) ary ny lanjany (12 grama mihoatra ny totalin'ny 238 grama). Fiovana tsy voavidim-bola izy ireo rehefa eo am-pelatananao izany. Ny fanoherana ny rano (IP68) koa dia mijanona tsy miova.
Mazava ho azy fa nisy fanatsarana ny processeur izay entiny, ilay A15 Bionic vaovao, matanjaka sy mahomby kokoa noho ny A14 Bionic an'ny iPhone 12. Tsy ho zavatra ho tsikaritrao koa izany, satria ny processeur "taloha" dia mbola miasa mora foana ary mihoatra ny ampy amin'ny fampiasana rindranasa na lalao, na dia ny mitaky be indrindra aza. Ny RAM, izay tsy faritan'i Apple velively, dia miova tsy miova miaraka amin'ny 6GB. Ny safidy fitehirizana dia manomboka amin'ny 128GB, mitovy amin'ny tamin'ny taon-dasa, fa amin'ity taona ity isika dia manana maodely "Top" vaovao mahatratra hatramin'ny 1TB ny fahaizany, zavatra hahaliana ny vitsy noho ny vidiny ary satria tsy tena ilaina amin'ny mpampiasa maro an'isa.
Apple dia niantso azy io ho Super Retina XDR Display Pro Motion. Ao ambadik'ity anarana sonorous ity dia manana efijery OLED tena tsara izay mitazona ny habe mitovy amin'ny 6,7 ", miaraka amina fanapahan-kevitra mitovy fa ao anatin'izany ny fanatsarana izay nandrasana hatry ny ela: ny tahan'ny famelomana 120Hz. Midika izany fa ho malama kokoa ny sarimiaina sy ny tetezamita. Ny olana atrehin'ity efijery vaovao ity dia ny fampidirana sary mihetsika ao amin'ny iOS efa tena milamina, ka raha vao jerena dia mety tsy dia tsikaritr'izy ireo firy, fa miseho izany, indrindra rehefa mamoha ilay fitaovana sy "manidina" mankany amin'ny birao findainao ireo sary masina rehetra.
Apple dia nitondra ny efijery Pro Motion (antsoiny hoe 120Hz) ho an'ny iPhone, ny sasany hieritreritra fa efa ho amin'ny ora io, fa nanao azy tamin'ny fomba tsara fotsiny izay misy fiantraikany tsy ny fahitanao ny efijery fa misy koa tsara amin'ny amponga. Ny tahan'ny famelomana ity efijery ity dia miovaova arakaraka ny 10Hz raha tsy ilaina intsony (ohatra rehefa mijery sary mijanona) hatramin'ny 120Hz raha ilaina (rehefa mikorisa amin'ny tranonkala, amin'ny sary mihetsika sns.). Raha niaraka tamin'ny 120Hz foana ny iPhone, ankoatry ny tsy ilaina dia hohena be ny fizakantenan'ny terminal, ka nisafidy an'io fifehezana mavitrika io i Apple izay miovaova arakaraka ny filan'ny fotoana izao, ary fahombiazana izany.
Nisy fiovana nantenain'ny maro amintsika koa: nihena ny haben'ny notch. Mba hanaovana izany, dia nafindra ny headset, teo an-tsisin'ny efijery fotsiny, ary nahena ny haben'ny modely fankasitrahana ny tarehy. Ny fahasamihafana dia tsy goavana, saingy tsikaritra izany, na dia kely aza ny fampiasana azy (farafaharatsiny amin'izao fotoana izao). Apple dia tokony (tokony) nisafidy ny hanampy zavatra hafa ao amin'ny bara fananganana status, fa ny tena izy dia ny manohy na mahita ireo sary masina mitovy amin'ny batterie, WiFi, fandrakofana fotoana ary amin'ny ankamaroan'ny serivisy misy anao. Tsy azontsika atao ny manampy ny isan-jaton'ny bateria, ohatra. Toerana iray very maina izay ho hitantsika raha toa ka manamboatra ireo fanavaozana ho avy.
Ny fanovana farany eo amin'ny efijery dia tsy dia tsikaritra loatra: famirapiratana mahazatra ny 1000 nits, raha ampitahaina amin'ny 800 nits ny maodely hafa teo aloha, mitazona famirapiratana fatratra 1200 nits rehefa mijery ny atiny HDR. Tsy hitako ny fiovana rehefa mahita ny efijery amin'ny antoandro be eny an-dalambe aho, dia mbola tena tsara tarehy toa ilay iray amin'ny iPhone 12 Pro Max.
Batterie tsy mety resy
Apple dia nahatanteraka izay toa sarotra tratrarina, ny bateria tena tsara an'ny iPhone 12 Pro Max dia nohatsarain'ny iPhone 13 Pro Max. Ny ankamaroan'ny lesoka dia ny efijery, miaraka amin'ny tahan'ny haingam-pandeha izay nolazaiko taminao teo aloha, ny processeur A15 vaovao dia misy fiantraikany ihany koa, mahomby kokoa toy ny isan-taona, nefa tsy isalasalana fa ny singa mampiavaka azy lehibe indrindra dia ny batery lehibe kokoa. Ny iPhone 13 Pro Max vaovao dia manana batterie mahazaka 4.352mAh, raha oharina amin'ny 3.687mAh an'ny iPhone 12 Pro Max. Ny maodely rehetra amin'ity taona ity dia mahita fiakaran'ny bateria, fa ny iray nahatratra ny fiakarana faran'izay betsaka dia ny ankamaroan'ny fianakaviana indrindra.
Raha ny iPhone 12 Pro Max no teo an-tampon'ny fahaleovan-tena, nandresy ny faran'ny fifaninanana tamin'ny bateria lehibe kokoa, io iPhone 13 Pro Max io dia hametraka avo be ny bara. Nanana ny iPhone vaovao teny an-tanako nandritra ny fotoana fohy aho, ampy hahitako an'izany Tonga amin'ny faran'ny andro aho miaraka amin'ny bateria betsaka kokoa noho ny teo aloha. Mila apetraka amin'ny andrana aho amin'ireo andro be fitakiana izay tsy nahatratra ny faran'ny andro ny 12 Pro Max noho ny fampiasana be dia be, saingy toa hitohy tanteraka ity Pro 13 Max ity.
Sary tsara kokoa, indrindra amin'ny hazavana ambany
Tany am-piandohana no nilazako azy io, izay nametrahan'i Apple ny sisa tavela dia tao anaty fakantsary. Ity maodely lehibe kokoa izay manakana ny fandrakofana tamin'ny taon-dasa tsy hanompo antsika amin'ity taona ity mihoatra ny manonitra izany tsy fanelingelenana izany. Apple dia nanatsara ny tsirairay amin'ireo masolavitra fakantsary telo, telephoto, zoro malalaka, ary ultra-wide. Sensors lehibe kokoa, teboka lehibe kokoa ary aperture lehibe kokoa ao anatin'ny roa farany, miaraka amin'ny zoom izay 2,5x ka hatramin'ny 3x. Midika inona izany? Amin'izay ahazoantsika sary tsara kokoa, izay tsikaritra indrindra amin'ny hazavana ambany. Ny fakan-tsary tao amin'ny iPhone 13 Pro Max dia nihatsara tamin'ny hazavana ambany ka misy ny fotoana izay mitsambikina amin'ny iPhone 12 Pro Max ny maody alina fa tsy amin'ny iPhone 13 Pro Max, satria tsy ilainao izany. Raha ny tokony ho izy, izao dia manome alim-pandihizana amin'ny alina avokoa ireo lantana telo ireo.
Apple dia misy koa fiasa vaovao antsoina hoe "Fomba fanaovana sary". Leo ny fakàn'ny sary iPhone “fisaka”? Ankehitriny dia azonao atao ny manova ny fomba fihetsiky ny fakan-tsarin'ny telefaoninao, mba hahafahany maka sary mivoaka miaraka amin'ny mifanohitra kokoa, mamiratra, mafana na mangatsiaka kokoa. Efa voafaritra mialoha ireo fomba, fa azonao atao ny manova azy ireo araka ny itiavanao azy, ary rehefa nametraka fomba ianao dia ho voafantina mandra-panovanao azy indray. Tsy azo ampiasaina ireo mombamomba ireo raha maka sary amin'ny endrika RAW ianao. Ary farany Maody maodro, izay mikarakara ny zoro somary malalaka, izay ahafahanao maka sary ny zavatra misy 2 sentimetatra avy amin'ny fakantsary. Zavatra mitranga ho azy izany rehefa manakaiky ianao, ary na dia nieritreritra aza aho tamin'ny voalohany fa tsy hanome firy, ny marina dia mamela anao haka sary anao tena mahaliana.
Iray ihany ny zavatra tsy tiako tamin'ny fanovana an'ity fakantsary ity: ny fitomboan'ny zoom amin'ny telefaona. Izy io dia ilay solomaso ampiasaina matetika amin'ny maody fakana sary, ary Tiako ny manana zoom 2,5x tsara noho ilay 3x vaovao satria tsy maintsy mijery lavitra kokoa aho hahazoana sary vitsivitsy, ary indraindray tsy azo atao izany. Ho lasa fahazarana izany.
Sary fampiharana amin'ny sary maody maodera
ProRes Video sy Mode sinema
Ny iPhone no tampony foana teo amin'ny resaka fandraisam-peo. Ny fiovana rehetra amin'ny fakan-tsary nolazaiko ho an'ny sary dia hita taratra ao amin'ny fandraketana horonantsary, toa ny miharihary, fa koa Apple dia nanisy fiasa vaovao roa, iray izay hisy fiantraikany kely amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa, ary iray hafa izay hanome eny betsaka , azo antoka. Ny voalohany dia ny fandraisam-peo ProRes, codec izay mitovy endrika "RAW" izay ahafahan'ireo matihanina manova ny horonantsary miaraka amin'ny fampahalalana rehetra ao anatiny, saingy tsy tokony hisy fiatraikany amin'ny mpampiasa mahazatra mihitsy izany. Raha ny marina, ny vokany dia ny ProRes 1K minitra 4 minitra manana habaka 6GB, ka raha tsy mila izany ianao dia avelao ho kilemaina.
Ny Mode Cinematic Mode dia mahafinaritra be, ary miaraka amina fanomanana sy fiofanana kely dia hanome valiny tsara ianao. Izy io dia toy ny Portrait Mode fa amin'ny horonantsary, na dia tsy mitovy aza ny fandehany. Rehefa mampiasa an'ity maody ity ianao dia voafetra amin'ny 1080p 30fps ny fandraisam-peo, ary ny valiny azonao dia ny mifantoka amin'ny lohahevitra lehibe ilay horonantsary ary manjavozavo ny ambiny. Ny iPhon dia manao izany ho azy, mifantoka amin'ny mpijery, ary miova arakaraka ny ahatongavan'ireo zavatra vaovao hiditra ao anaty fiaramanidina. Azonao atao ihany koa ny manao an-tanana azy io mandritra ny fandraisam-peo, na aoriana amin'ny alàlan'ny fanovana ilay horonan-tsary amin'ny iPhone-nao. Manana ny lesoka izy, ary tokony hihatsara, saingy tsy maintsy ekena fa mahafinaritra ary manome valiny manaitra tokoa.
Fiovana tena lehibe
Ny iPhone 13 Pro Max vaovao dia maneho fiovana tena lehibe raha oharina amin'ny taranaka teo aloha amin'ny lafiny mifandraika amin'ny finday smartphone toy ny batterie, ny efijery ary ny fakan-tsary. Izany dia tsy maintsy ampiana ny fiovana mahazatra amin'ny taona maro, miaraka amin'ny processeur vaovao A15 Bionic izay handresy ny refy rehetra any ary ho. Toa ianao ihany no mitondra an'io iPhone io eny an-tananao, fa ny tena izy dia tsy mitovy io iPhone 13 Pro Max io, na dia tsy mahatsikaritra aza ny hafa. Raha olana aminao io dia tokony hiandry fanovana famolavolana amin'ny taona ho avy ianao, fa raha te hanana iPhone tsara lavitra noho ilay teo aloha ianao dia ara-drariny ilay fanovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Famakafakana ny iPhone 13 Pro Max: inona no niova tao amin'ny telefaona Apple vaovao
Ny fakana ny sary toy itony miaraka amin'ireo iPhones roa mifanila aminao dia nahatratra sary 3D stereoscopic EXCELLENT. Izaho dia naka ny sariko rehetra tamin'ny 3D nandritra ny taona maro, ary ny iray amin'ireo dia ny fampiasana fakantsary roa, ny iray hafa dia miaraka amin'ny finday na fakan-tsary iray ihany maka fakana sary roa sentimetatra vitsivitsy toy ny hoe nametraka finday hafa teo akaikiny ianao - Tsy mitombina afa-tsy ho an'ny sary izay tsy misy mihetsika, na koa fomba iray hafa dia ny fampiasana i3DMovieCam, izay mampiasa ny lantiro roa an'ny iPhone izay mifanaraka (ao amin'ny pro ny mahazatra sy ny zoom, ao amin'ny 12 sy 11 izay tsy pro ny ara-dalàna sy ny zoro somary malalaka, sns.), amin'ny alàlan'ity App farany ity ihany koa dia mamela anao handrindra horonantsary amin'ny 3D ... Ary manana kalitao avo kokoa noho ny fakantsary 3D hafa ao anatin'izany ny 3D1 na ny Lume Pad farany teo.